DAAWO+XOG: Fadeexado musuqmaasuq oo laga baarayo Maaliyadda G Banaadir & Xog soo baxday.
Wararka laga helayo Xarunta Gobolka Banaadir. Ayaa sheegaya in Hanti Dhowrka Guud uu baaritaan ku bilaabay. Xafiiska Maamulka iyo Maaliyadda Gobolka. Kaddib markii ay soo baxday in lacag ku dhow Hal Milyan oo dollar la isticmaalay wixii ka dambeeyay 24-kii July.
Xilligaasoo xarunta Gobolka ka dhacday qaraxii sababay. Geerida Guddoomiyihii hore Gobolka Banaadir iyo Howlwadeenadii ka tirsanaa Maamulka.
Sida wararku sheegayaan. Guddoomiyaha cusub ee Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho. Cumar Maxamuud Maxamed ayaa dalbaday in la baaro wixii laga isticmaalay Qasnada dowladda Hoose. Labadii bilood ee kala guurka ka jiray gobolka. Kaddib qaraxii uu ku geeriyooday Guddoomiyihii hore Gobolka Banaadir Eng. Yariisow.